အစမို့ပါအချစ်ရယ် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on November 28, 2020 Author admin	Comments Off on အစမို့ပါအချစ်ရယ်
မပုရေ စိုးကိုသံပုရာရည်တစ်ခွက်လောက်ယူခဲ့ပေးပါ” အချိန်အတော်ကြာသော်လည်းမပုကပေါ်မလာချေ၊ထို့ကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုင်နေရာမှထ ကာမီးဖိုချောင်သို့ထွက်လာလေသည်၊မီးဖိုချောင်ထဲတွင်လည်းမပုကိုမတွေ့ရသောကြောင့်အလုပ် သမားတန်းလျားဖက်သို့ထွက်လာလေသည်၊မပု၏အခန်းရှေ့တွင်ယောက်ျားဖိနပ်တစ်ရံနှင့်မပု၏ ဖိနပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်သူမ၏စိတ်ထဲမှစဉ်းစားလိုက်မိသည်၊ “အင်း မပုမှာယောက်ျားမရှိဘူး သူ့ဧည့်သည်လားမသိဘူး” စိုးမိုးခိုင်သည်တန်းလျားနားသို့တဖြည်းဖြည်းကပ်သွားရင်းလှေခါးနားရောက်သောအခါအိမ် ထဲမှအသံများကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ငယ်ရွယ်သူပီပီစပ်စုလိုသောကြောင့်ထရံအပေါက်မှအသာ ချောင်းကြည့်လိုက်လေသည်၊အခန်းထဲတွင်မပုနှင့်ခြံစောင့်ကိုအေးတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည်၊ကိုအေး ကအပေါ်ပိုင်းတွင်အ၀တ်မရှိဘဲပုဆိုးကိုကွင်းသိုင်းထားကာမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင်ဆောင့် ကြောင့်ထိုင်နေလေသည်။
မပု၏အ၀တ်များသည်လည်းဘေးတွင်ပုံကျနေကာတစ်ကိုယ်လုံးဗလာ ဖြစ်နေလေသည်၊ကိုအေးသည်မပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအသာဆွဲဖြဲလိုက်ပြီးသူမ၏နို့အုံများကိုလက် ဖြင့်ဆုပ်နယ်နေလေသည်၊မပုကကိုအေး၏လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ှုသူမ၏စောက်ဖုတ်အ၀တွင် တေ့ပေးလိုက်သည်၊ “ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်ကိုအေး” “အေးပါကွာ” စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကိုအသည်းတယားယား။ရင်တဖိုဖိုနှင့်ကြည့်နေမိလေသည်၊ အသက်အရွယ်ကအသိဥာဏ်ပေးသော်လည်းမျက်မြင်တွေ့ရခြင်းသည်ပထမအကြိမ်ဖြစ်လေသည်၊ အိမ်ကလေးသည်တစ်ချက်။နှစ်ချက်မဋသိမ့်ကနဲတုန်သွားသည်၊ကိုအေးကသူ၏တင်ပါးကိုရှေ့သို့ တွန်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်၊ ထို့နောက်ကိုအေးသည်မပု၏နို့ကိုဆုပ်နယ်နေသောသူ၏ လက်များဖြင့်မပု၏ခါးကိုကိုင်လိုက်ပြီးဆွဲယူလိုက်ရာမပုသည်ကော့ပျှုံပါလာလေသည်၊စိုးမိုးခိုင် သည်မျက်လုံးလေးပြှူုးကြည့်နေရင်းတံတွေးကိုအသံမထွက်အောင်မျိုချလိုက်မိသည်။
ကိုအေး သည်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှဒူးထောက်လိုက်သောအခါမပု၏ခါးနှင့်ကျောပြင်သည်ကုတင်ပေါ် သို့ပြန်ကျသွားလေသည်၊ထို့နောက်ကိုအေးကမပု၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပေါ်သို့တွန်းတင်လိုက် ရာမပု၏တင်ပါးများသည်အပေါ်သို့မြောက်တက်သွားကာအိပ်ယာနှင့်လွတ်နေလေသည်၊ထို့နောက် ကိုအေးကမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းအောက်မှလက်လဋှိုသူမ၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်၊ကို အေးကသူ၏လီးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်။ထိုးသွင်းလိုက်လုပ်နေလေသည်၊ စိုးမိုးခိုင် သည်မပု၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအသေအချာကြည့်လိုက်မိသောအခါမျက်စိများကိုမှိတ်ထားလျက်ကို အေးကလီးကြီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တိုင်းတင်ပါးများကိုကော့ကော့ပေးသည်ကိုသတိထားလိုက်မိလေ သည်၊ထိုသို့တဖြည်းဖြည်းအထုတ်အသွင်းလုပ်နေရာမှကိုအေးကနှစ်ချက်သုံးချက်ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုက်လေသည်၊ထိုအခါတွင်အိမ်လေးသည်သိမ့်ကနဲလှုပ်သွားလေသည်။
ထို့အပြင်မပု၏ တဟင့်ဟင့်ညည်းတွားသံနှင့်အတူဖတ်ဖတ်ဟူသောအသံကိုပါကြားလိုက်ရလေသည်၊ “မပု ။ ကိုအေးလိုးတာကောင်းရဲ့လားဟင်” “အို သိပ်ကောင်းတာပေါ့တော် ။နာနာလေးလိုးစမ်းပါကိုအေးရယ် ။ ခံလို့ကိုမ၀နိုင်ဘူး” ထိုအခါကိုအေးသည်အသားကုန်လိုးလေတော့သည်၊ချောင်းကြည့်နေသောစိုးမိုးခိုင်မှာ လည်းရာဂစိတ်များတဖြည်းဖြည်းထကြွလာလေသည်၊စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်နေသောကြောင့်စောက်ဖုတ်အပေါ်ရှိထဘီမှာစိုစိစိဖြစ်နေလေသည်၊သူမ၏လက်ကလည်း စောက်ဖုတ်ပေါ်သို့အုပ်ကိုင်လျက်ပွတ်သပ်နေမိလေသည်၊ထိုစဉ်တစ်ဖက်ခြံမှစိုးမိုးခိုင်၏အစ်မ၏ ရည်းစားဖြစ်သောဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏အစ်မရှိသည်ဟုထင်ှုသူမတို့၏ခြံတွင်းသို့မလွယ် ပေါက်မှတဆင့်ဝင်လာလေသည်၊ထိုအခါနောက်ဖေးတန်းလျားအနီးတွင်စိုးမိုးခိုင်ဘာကိုသဲသဲမဲမဲ ကြည့်နေသလဲဟုသိလိုစိတ်ဖြင့်အနားသို့တိုးကပ်လာရင်း။
ထရံပေါက်မှချောင်းကြည့်ရင်းသူမ၏ စောက်ဖုတ်ကိုထဘီပေါ်မှအုပ်ကိုင်လျက်ပွတ်သပ်နေသောစိုးမိုးခိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်၊စိုးမိုးခိုင် သည်ရှေ့သို့သာအာဏ္ဍုံစိုက်နေသောကြောင့်သူမ၏အနားသို့ဇော်ထွန်းရောက်လာသည်ကိုမသိသဖြင့် ဇော်ထွန်းလည်းအနီးရှိအပေါက်မှအတွင်းဘက်သို့ချောင်းကြည့်လိုက်သည်၊ “ကိုအေးရယ် အားရပါးရလိုးစမ်းပါ ။ အားမရှိတော့ဘူးလား” “နဲနဲမောသွားလို့ပါမပုရယ် ။ ကဲ အားကုန်သွန်တော့မယ်နော်” ထို့နောက်ကိုအေးကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်လိုက်ပြီးမပု၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုသူ၏ပုခုံး ပေါ်သို့တင်ကာသူ၏လီးကြီးကိုမပု၏စောက်ခေါင်းဝတွင်တေ့ပြီးအားကုန်ဆောင့်သွင်းလိုက်လေ သည်၊ဇော်ထွန်းလည်းကိုအေးတို့လိုးနေသည်ကိုကြည့်ရင်းလီးတောင်လာလေသည်၊ထို့ကြောင့်စိုး မိုးခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာသူမသည်မပုတို့ကိုချောင်းကြည့်ရင်းအားမလိုအားမရဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
ထိုအခါဇော်ထွန်းကသူမ၏အနားသို့ကပ်သွားလျက်မေးလိုက်သည်၊ “စိုးစိုး ဘာလုပျနတောလဲ” “ဟို ဟို မပုအိပ်နေတာကိုကြည့်နေတာပါ” “ကဲ ဒါဖြင့်ဆက်ကြည့်လေ ။ ကိုဇော်သွားတော့မယ်” ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကသူ၏အိမ်သို့ပြန်သွားလေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်သူမ၏စိတ်ထဲမှစဉ်းစား လိုက်သည်၊ “ငါချောင်းကြည့်နေတာကိုသူသိသွားလားမသိဘူး ။ ငါသွားအစ်ကြည့်ဦးမှ” ထိုသို့စဉ်းစားရင်းစိုးမိုးခိုင်သည်ဇော်ထွန်းတို့ခြံဘက်သို့ကူးသွားလေသည်၊ဇော်ထွန်း၏ အခန်းရှေ့သို့ရောက်သောအခါတံခါးကိုမခေါက်သေးဘဲသော့ပေါက်မှအတွင်းသို့ချောင်းကြည့် လိုက်လေသည်၊ထိုအခါဇော်ထွန်းသည်ကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ဂွင်းတိုက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက် ရလေသည်၊သူ၏လီးသည်လုံးပတ်နှစ်လက်မခန့်ရှိပြီးအရှည်တစ်ထွာခန့်ရှိသဖြင့်သူမအဖို့အထူး အဆန်းဖြစ်နေလေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်ဇော်ထွန်း၏လီးကိုကြည့်ရင်းကာမစိတ်များပိုမိုထကြွလာ လေသည်။
ထို့နောက်အခန်းတံခါးကိုအသာခေါက်လိုက်သောအခါဇော်ထွန်းသည်ပုဆိုးကိုကမန်း ကတန်းပြန်ဝတ်ရင်းတံခါးကိုလာဖွင့်ပေးလေသည်၊ “သြော် စိုးစိုးပါလား ။လာလေ ။ကိုဇော့်ကိုဘာခိုင်းမလို့လဲ” “အင်း ညကျရင်သမ္မတ မှာမမနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မလုိ့။ အဲဒါကိုဇော်လိုက်ပို့နော်” စိုးမိုးခိုင်ကလာရင်းကိစဏကိုလွှဲပြောရင်းဇော်ထွန်း၏အောက်ပိုင်းသို့မသိမသာကြည့်လိုက်ရာ သူ၏လီးကြီးမှပုဆိုးကိုဖောက်ထွက်တော့မတတ်ဖောင်းထနေလေသည်၊သူမ၏စိတ်ထဲတွင်ရာဂ စိတ်များပြင်းထန်နေပြီးဇော်ထွန်းကိုလည်းယခင်ကတည်းကကြိတ်ှုချစ်နေမိသောကြောင့်သူ၏ အနားသို့သွားရင်းရုတ်တရက်ခြေချော်သွားဟန်ဆောင်ကာဇော်ထွန်းအပေါ်သို့လှဲချရင်းပုဆိုးအစ ကိုမသိမသာဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်ခါးတွင်ပုဆိုးမရှိတော့ဘဲဖင်ထိုင်လဲကျသွားလေ သည်၊ “အိုး မတော်လို့နော်ကိုဇော် ။
ကဲ ထထ” စိုးမိုးခိုင်သည်ဇော်ထွန်းကိုပုဆိုးကျွတ်အောင်လုပ်ပြီးမှရှက်စိတ်ဝင်လာသောကြောင့်နောက် သို့လှည့်ပြေးရန်ကြံလိုက်သည်၊သို့သော်ဇော်ထွန်းကသူမကိုလှမ်းဖက်ှုသူ၏ရင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲသွင်း လိုက်လေသည်၊စိုးမိုးခိုင်ကဟန်ဆောင်ှုဏ္ဍုန်းကန်လိုက်သောကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမှာကုတင် ပေါ်သို့လဲကျသွားလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်ပက်လက်အနေအထားဖြစ်သွားသော်သူမ၏နှုတ်ခမ်း ကလေးကိုပါးစပ်ဖြင့်စုပ်ယူလိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကလည်းသူမ၏နို့အုံတစ်ဖက်ကိုအကျôပေါ်မှ ဆုတ်ကိုင်လျက်ဖျစ်ဍှစ်ပေးလိုက်သည်၊ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်လည်းသူမ၏တင်ပါးကိုအသာပွတ် သပ်လိုက်လေသည်၊အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစိုးမိုးခိုင်သည်ဇော်ထွန်း၏အကိုင်အတွယ်အောက် တွင်ထွန့်ထွန့်လူးနေလေတော့သည်၊ဇော်ထွန်းကသူမ၏ပါးပြင်တစ်ဖက်ကိုနမ်းလိုက်ရင်းသူမ၏ အကျôကြယ်သီးများကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်ချလိုက်သည်။
ထို့နောက်အကျôကိုလှန်ချလိုက်သောအခါစိုး မိုးခိုင်သည်ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင်ဘရာစီယာလေးသာကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်ဘရာစီယာ အောက်မှပေါ်ထွက်နေသောသူမ၏ရင်သားဖြူဖြူလေးများကိုလက်နှစ်ဖက်ယှက်ှုကာထားရင်း ပြောလိုက်သည်၊ “ကိုဇော်ရယ် စိုးရှက်တယ်” “မရှက်ပါနဲ့ စိုးရယ် ။ဒါရှက်စရာမှမဟုတ်တာ” ဇော်ထွန်းကပြောရင်းသူမ၏တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့စုပ်နမ်းပေးလိုက်ရာသူမ၏စိတ်ထဲတွင်မဏ္ဍိုးမရွ ဖြစ်လာလေသည်၊ဇော်ထွန်း၏လက်များကသူမ၏ဘရာစီယာကြားထဲသို့တိုးဝင်လာလေသည်၊ထို့ နောက်သူမ၏နို့အုံဖောင်းဖောင်းအိအိလေးများကိုဘရာစီယာအတွင်းမှကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လျက်နို့ သီးထိပ်လေးများကိုလက်ချောင်းများဖြင့်အသာအယာဍှပ်ဆွဲပေးလိုက်ရာနို့သီးခေါင်းလေးများမှာ တဖြည်းဖြည်းထောင်ထလာလေသည်၊ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကဘရာစီယာချိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဆွဲချွတ် လိုက်သောအခါဝင်းပနေသောနို့အုံလေးနှစ်လုံးမှာတုန်တုန်ရီရီနှင့်ထွက်ပေါ်လာလေတော့သည်။
ဇော်ထွန်းကထောင်ထလာသောနို့သီးခေါင်းလေးများကိုပါးစပ်ဖြင့်စုပ်ပေးရင်းပျော့ပျော့အိအိနို့အုံ လေးများကိုလည်းလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်နေလေသည်၊နောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့သူမ၏ ၀မ်းဗိုက်သားများနှင့်ခြေသလုံး။ပေါင်တန်။တင်ပါးများကိုပွတ်သပ်နေလေသည်၊ ထို့အပြင်သူ၏လီးတန်မာမာကြီးသည်သူမ၏ပေါင်ကြားထဲရှိစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိ လေးပေါ်သို့လှာုထောက်မိနေသောကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်ရင်တထိတ်ထိတ်ခုန်လာလေတော့ သည်၊ထိုအခါဇော်ထွန်းကသူမ၏ထဘီလေးကိုပေါင်ရင်းအထိဆွဲလှန်လိုက်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီ လေးကိုအသာဆွဲချွတ်လိုက်သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်စိတ်ထဲမှရှက်သလိုလိုဖြစ်နေသော်လည်းကာမစိတ် များပြင်းထန်နေသောကြောင့်ဘာမဋမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်လေသည်၊ထို့နောက်သူမ၏အမွှေးနုလေး များဖုံးလွှမ်းနေသောစောက်ဖုတ်လေးကိုဇော်ထွန်းကသူ၏လက်ဝါးဖြင့်အုပ်ကိုင်လျက်ပွတ်သပ်ပေး လိုက်လေသည်။
စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့လက်ချောင်းများဖြင့်အလျားလိုက်ပွတ်သပ် ပေးရင်းလက်မနှင့်လက်ခလယ်ဖြင့်စောက်စေ့မာမာလေးကိုဍှပ်ဆွဲလိုက်သည်၊ဇော်ထွန်းသည် လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုသူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့အသာထိုးသွင်းလိုက်ရာလက်နှစ်ဆစ်ခန့်တိုးဝင် သွားပြီးစောက်ရည်ကြည်လေးများဖြင့်စိုရွှဲနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်၊ အထာကျွမ်းသောဇော် ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်ခံချင်နေပြီကိုသိလိုက်သောကြောင့်သူမ၏ထဘီကိုခါးလည်အထိဆွဲလှန်လိုက်ပြီးဖြူ ဖွေးသွယ်လျသောပေါင်တန်လေးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကားလိုက်ရာဖောင်းဖောင်းအိအိစောက်ဖုတ်လေး၏ အလယ်ရှိအကွဲကြောင်းလေးမှာပြဲအာသွားပြီးအတွင်းသားနီနီရဲရဲလေးများကိုပါတွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်၊စော က်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး၏ထိပ်ရှိစောက်စေ့နီနီလေးမှာတော့ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ထောင်ထနေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏ပေါင်ကြားထဲသို့ဒူးထောက်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး။
သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုသူ၏ပေါင်ပေါ်သို့ခွတင်လိုက်သည်၊ထို့နောက်သူ၏လီးဒစ်ကြီးဖြင့်ပြဲအာနေသော စိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လေဋာက်အထက်အောက်ပွတ်ပေးလိုက်ရာစိုးမိုးခိုင် သည်သူမ၏ဖင်လေးကိုမောက်ကြွရင်းလူးလိမ့်နေလေသည်၊ ထိုကဲ့သို့စိုးမိုးခိုင်ထကြွလာသောအခါ မှဇော်ထွန်းကသူ၏လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာပြဲအာနေသောစောက်ဖုတ်အဝလေးတွင်တှေု့ အသာဖိသွင်းလိုက်သည်၊စိုးမိုးခိုင်ကလည်းသူမ၏သွယ်လျသောပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကိုတတ်နိုင် သမဋဖြဲကားလျက်ခါးကိုကော့ပေးနေမိလေသည်၊ထိုအခါတွင်ဇော်ထွန်း၏ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောလီး ကြီးသည်သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်သွားလေသည်၊အပျိုစင်လေးဖြစ်သော စိုးမိုးခိုင်သည်ကြီးမားသောလီးကြီး၏ဒစ်ကိုမခံနိုင်သောကြောင့်ပါးစပ်မှညည်းတွားလိုက်မိလေ သည်၊ “အား နာတယ်ကိုဇော် ။ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကိုဇော်ရယ် ။
အား အဟင့်ဟင့် … မလုပ်ပါနဲ့တော့ ကိုဇော်ရယ်… စိုးနာတယ်… အား” “နဲနဲလေးပါစိုးရယ် … ခဏတေတာ့အောင့်ခံနော် …နောက်ကျရင်မနာတော့ပါဘူး ….တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခံလို့ကောင်းလာမှာပါနော်” ဇော်ထွန်းကချော့မော့ပြောရင်းစိုးမိုးခိုင်၏ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကိုနမ်းလိုက်သည်၊လက်နှစ်ဖက် ကလည်းလုံးကျစ်တင်းမာနေသောနို့လေးနှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ဍှစ်ပေးလိုက်သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည် စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့မချိမဆန့်ဝင်လာသောလီးကြီး၏ဒစ်ကြောင့်နာကျင်မှုကတစ်မျိုး။အပေါ် ပိုင်းတွင်ဇော်ထွန်းကနှိုးဆွမှုကြောင့်ခံစားနေရသောအရသာကတစ်မျိုးဖြင့်အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုး ကိုခံစားနေရလေသည်၊နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်လေးနှစ်ခုမှာနီရဲနေကာဇော်ထွန်း၏တံတွေးများဖြင့် စိုစွတ်နေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်နို့သီးခေါင်းလေးတစ်ခုကိုပွတ်ချေပှေုးကျန် နို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက်ကိုမူပါးစပ်ဖြင့်စုပ်လိုက်။
စို့လိုက်လုပ်ပေးနေလေသည်၊ထို့အပြင်နို့သီး ခေါင်းလေးများကိုလဋာဖြင့်လျက်လိုက်။သွားဖြင့်ကိုက်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရာစိုးမိုးခိုင်သည်အောက် ပိုင်းကနာကျင်မှုများကိုမေ့လျော့လာပြီးကာမစိတ်များပိုမိုထကြွလာလေတော့သည် “ကိုဇော်” “ဘာလဲစိုး” “နဲနဲသွင်းကြည့်ပါလားဟင်” “အင်းလေ ။ ဒါဆိုစိုးနာရင်နဲနဲအောင့်ခံနော်” စိုးမိုးခိုင်ကသွယ်လျသောပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကိုဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးသို့ကပ်သွားသည်အထိ ဖြဲကားပေးလိုက်သောအခါဇော်ထွန်းကသူ၏လီးကြီးကိုခပ်ဆတ်ဆတ်ဖိသွင်းလိုက်သည်၊ ထိုအခါ တွင်ဇော်ထွန်း၏လီးကြီးသည်စိုးမိုးခိုင်၏စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့တစ်ဝက်ခန့်မြုပ်ဝင် သွားလေသည်၊ “အင့် အင့် အီး အ” စိုးမိုးခိုင်သည်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရသော်လည်းအံကိုကြိတ်လျက်တောင့်ခံ နေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်ကအံကိုကြိတ်လျက်လက်သီးကလေးဆုပ်ကာကြိတ်မှိတ်ခံ နေသည်ကိုကြည့်ရင်း။
လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သူမ၏ခါးလေးကိုဖက်ကာခပ်နာနာလေးဖှိုဆောင့်သွင်း လိုက်လေသည်၊ထိုအခါဖောက်ဟူသောခပ်တိုးတိုးအသံတစ်ချက်နှင့်အတူစိုးမိုးခိုင်၏ညည်းညူသံ ကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ထိုအသံသည်သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲမှအပျိုေÕမးပေါက်သွားသောကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသောအသံဖြစ်သည်ကိုဇော်ထွန်းသိလိုက်လေသည်၊ စိုးမိုးခိုင်သည်လည်းမခံမရပ်နိုင် အောင်နာကျင်သွားသောကြောင့်ယောင်ှုအော်လိုက်မိလေသည်၊ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကသူ၏လီး ကြီးကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့အဆုံးထိဆောင့်ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်နာကျင် လွန်းသောဝေဒနာကြောင့်အံကိုကြိတ်ှုခံနေသော်လည်းဇော်ထွန်း၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုအတင်းတွန်း ကန်ထားမိလေသည်၊ “အား ကိုဇော် နာတယ် …. နာတယ်…မခံနိုင်တော့ဘူး …. တော်ပါတော့… အဟင့်အဟင့်” ဇော်ထွန်းသည်သူ၏လီးကြီးကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့အဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက်ပြီး။
နောက်ဆက်ှုမလှုပ်ရှားသေးဘဲနို့နှစ်လုံးကိုသာကိုင်တွယ်ဆော့ကစားရင်းသူမ၏တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖျစ်ဍှစ်ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်၊ထို့နောက်သူမ၏နှုတ်ခမ်းပါးလေးများကိုလဋာဖြင့်လျက်ပေးလိုက် သွားဖြင့်မနာအောင်ကိုက်ပေးလိုက်နှင့်လုပ်နေလေသည်၊ထို့အပြင်နို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးနှစ်ခုကို ပါလဋာဖြင့်လျက်ပေးလိုက်။ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်ပေးလိုက်နှင့်ဆွပေးနေသောကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်နာကျင်မှု ကိုမေ့ပျောက်ကာအရသာတွေ့လာလေတော့သည်၊ ထို့ကြောင့်အောက်မှနှေုဖင်နှစ်ခြမ်းကိုအစွမ်း ကုန်ဖြဲကားရင်းခါးကိုအပေါ်သို့ကော့ထိုးနေလေသည်၊ထိုအခါဇော်ထွန်းကသူ၏လီးကြီးကိုတစ် ၀က်ခန့်အထိဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက်အဆုံးထိပြန်လည်ဖိသွင်းလိုက်လေသည်၊စိုးမိုးခိုင်၏စောက် ပတ်လေးသည်ကြီးမားသောလီးတန်ကြီးကိုငုံထားရသောကြောင့်အစွမ်းကုန်ဖောင်းကြွနေလေ သည်၊ထို့အပြင်စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့အဆုံးထိတိုးဝင်လာသောလီးကြီးကြောင့်အောင့်သလိုလို။
နာသလိုလိုနှင့်ခံစားရလေသည်၊ဇော်ထွန်းကလည်းသူ၏လီးကြီးကိုတစ်ဝက်ခန့်ဆွဲထုတ်လိုက်။ အဆုံးထိအောင်ပြန်ှုဖိသွင်းလိုက်နှင့်လုပ်ပေးနေသောကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်လီးကြီးဝင်လာတိုင်း အောင့်သွားသောကြောင့်ခါးကလေးကော့သွားလိုက်။လီးကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်းစောက်ပတ်ထဲ တွင်ဟာတာတာနှင့်ခံစားလိုက်ရသောကြောင့်ဇော်ထွန်း၏ကျောပြင်ကြီးကိုအားမလို။အားမရသိုင်း ဖက်လိုက်နှင့်ဖြစ်နေလေသည်၊အရည်ကြည်များလည်းပိုမှိုစိမ့်ထွက်လာသောကြောင့်လီးကြီးဝင် ထွက်တိုင်းစောက်ခေါင်းသံများပါပေါ်ထွက်နေလေသည်၊ စိုးမိုးခိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အရသာ တွေ့လာသောကြောင့်ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကိုရင်ဘတ်နှင့်ကပ်နေအောင်အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးရင်း ခါးကိုပါမောက်ှုကော့ထိုးပေးလေသည်၊ဇော်ထွန်းကလည်းအရှိန်ရလာသောကြောင့်သူ၏လီးကြီး ကိုစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ပတ်ကလေးထဲသို့အားကုန်ဆောင့်သွင်းနေလေသည်။
အား ကိုဇော် ဆောင့် ဆောင့် … တအားဆောင့်…. အအ အား အား ကောင်းလိုက်တာ ကိုဇော်ရာ အဟင့် အအအား” စိုးမိုးခိုင်သည်ပြီးခါနီးလာသောကြောင့်အားမလို။အားမရဖြစ်လာကာဇော်ထွန်း၏ခါးကိုလက် နှစ်ဖက်ဖြင့်တအားဆွဲဖက်ရင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအတင်းဖြဲကားပေးနေလေသည်၊ထို့အပြင်ဖင်ကို ကော့ေÕမာက်ှုစကောဝိုင်းသလိုလုပ်လိုက်။ဘယ်ညာရမ်းလိုက်နှင့်လုပ်နေသောကြောင့်ဇော်ထွန်း သည်လည်းလိုးရင်းလိုးရင်းကောင်းသည်ထက်ကောင်းလာသဖြင့်သူမ၏မို့ဖောင်းသောနို့အုံဖွေးဖွေး လေးနှစ်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ှုနှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ရင်းအားပါးတရဆောင့်လိုးနေလေ သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်သူမ၏စောက်ဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့တိုးဝင်နေသောဇော်ထွန်း၏လီးကို တဆတ်ဆတ်ဍှစ်ပေးရင်းအရည်များတရဟောစိုရွှဲကျလာကာတစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လျက်တစ်ချီ ပြီးသွားလေတော့သည်၊ဇော်ထွန်းသည်လည်းလိုးရင်းလိုးရင်း။
သူမ၏စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့သုတ် ရည်များကိုအားကုန်ပန်းထည့်ကာငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်၊ ထို့နောက်ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းတွင်သူ၏လီးကြီးကိုထိုးသွင်းထားရင်းနှစ်ယောက်စလုံးအမောပြေသည် အထိနေလိုက်သည်၊အတန်ကြာသောအခါမှဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်၏စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းမှသူ၏ လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်မှထသွားလေသည်၊ထို့နောက်ဖန်ခွက်နှစ်လုံးတွင်ခပ်ဍိုဍို ဆေးရည်ကိုလက်နှစ်လုံးခန့်စီထည်ှု့စိုးမိုးခိုင်ကိုအသာပွေ့ထူလိုက်ရင်းပေးလိုက်သည်၊ “ဘာတွေလဲဟင် ။စိုးမသောက်ချင်ဘူး” “ကိုဇော်လည်းသောက်မှာပါစိုးရယ်” ဇော်ထွန်းကမော့သောက်ပြလိုက်သည်ကိုကြည့်ရင်းစိုးမိုးခိုင်လည်းသူမ၏လက်တွင်းရှိဖန် ခွက်ထဲမှဆေးရည်ကိုမော့သောက်လိုက်သည်၊တစ်ကိုယ်လုံးပူရှိန်းသွားသလိုအားပြည့်လာသည်ဟု ခံစားလိုက်မိလေသည်၊ထို့နောက်စိုးမိုးခိုင်ကကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေရာမှကုတင်အောက်မှထဘီကို ၀တ်ရန်ကောက်ယူလိုက်သည်။
ထိုအခါဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်၏အနားသို့ကပ်သွားပြီးထဘီကိုင်ထား သောသူမ၏လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုအသာဆုပ်ကိုင်လျက်ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်သူမ၏ကိုယ်လုံး လေးကိုသိုင်းဖက်လိုက်ပြီးပါးကလေးကိုအသာအယာနမ်းလိုက်သည်၊ “ထဘီဝတ်ပါရစေဦးကိုဇော်ရယ်” “၀တ်တာပေါ့စိုးရယ် ။ ကိုဇော့်လီးကြီးမှာပေနေတာတွေကိုသုတ်ပေးပါဦး” “ဟင်း ။ ရှက်လိုက်တာ” စိုးမိုးခိုင်ကပြောရင်းပျော့ခွေနေသောဇော်ထွန်း၏လီးကိုသုတ်ပေးလိုက်သည်၊ “ကဲ သုတ်ပေးပြီးပြီ” “စိုးစောက်ဖုတ်မှာပေနေတာကိုလည်းကိုဇော်သုတ်ပေးမယ်နော်” ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကသူမ၏ထဘီကိုယူကာအတင်းသုတ်ပေးနေလေသည်၊ဇော်ထွန်းသည် အကြံနှင့်အချိန်ဆွှဲုသုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်လေသည်၊သူတို့နှစ်ယောက်သောက်ခဲ့သောဆေးရည် သည်တန်ဖိုးကြီးသောကာမအားတိုးဆေးဖြစ်လေသည်၊အတန်ကြာသောအခါစိုးမိုးခိုင်သည်လူရော စိတ်ပါလန်းဆန်းလာဏ္ဍုံသာမက။
တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေးလာပြီးစောက်ဖုတ်ထဲမှလည်းယားကျိကျိနှင့ခ်ံချင်စိတ်ပေါ်လာပြန်လေသည်၊ထို့ကြောင့်ဇော်ထွန်းကထဘီနှင့်မသုတ်တော့ဘဲစောက်ဖုတ်ကို လက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်နေသည်ကိုငြိမ်ခံနေလိုက်လေသည်၊ သူမ၏နို့အုံလေးများကိုပွတ်သပ် ဆုပ်ချေနေသည်ကိုလည်းသာယာနေမိသည်၊ဇော်ထွန်း၏ပေါင်ကြားသို့ကြည့်လိုက်မိသောအခါ ပျော့ခွေနေသောလီးကြီးမှာပြန်လည်ထောင်မတ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်သူမကို နောက်တစ်ချီတော့ထပ်လိုးမည်ဟုသိလိုက်လေသည်၊ထို့ကြောင့်မြန်မြန်လိုးလိုက်လဋင်မိမိ၏ခံချင် စိတ်ပြေသွားမည်ကိုသိသောကြောင့်စိုးမိုးခိုင်ကမိန်းမဥာ%်ဖြင့်စကားစလိုက်သည်၊ “ကိုဇော်ရယ် ။ စိုးမနေတတ်တော့ဘူး ။ မကလိပါနဲ့တော့။ စိုးကိုဒါလောက်လိုးရရင်ကျေနပ် ရောပေါ့ ။ စိုးပြန်တော့မယ်” “မပြန်ပါနဲ့ဦးစိုးရယ် ။ ကိုဇော့်လီးကြီးထောင်နေတာကိုမတွေ့ဘူးလား ။ တစ်ချီလောက်တော့ လိုးပါရစေဦးကွယ်” “စိုးကိုမသနားတော့ဘူးလားဟင် ။
ခုနကလဲတစ်ခါလုပ်ထားပြီးပြီ” “ချစ်လို့ပါကွယ် ။ စိုးမနာဘဲနဲ့သက်သက်သာသာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ့မယ်” “ကဲ ဒါဖြင့်ရင်လည်းမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်နော်” ဇော်ထွန်းကစိုးမိုးခိုင်ကိုကုတင်ခေါင်းရင်းဘက်သို့ကျောပေးထိုင်ခိုင်းပြီးသူကသူမနှင့်မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ှုခြေဆင်းထိုင်လိုက်သည်၊ ထို့နောက်စိုးမိုးခိုင်ကိုသူ၏ပေါင်ပေါ်သို့တက်ထိုင်ခိုင်ှုးသူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသူ၏ခါးနောက်တွင်ဖြဲကားထားလိုက်သည်၊ပေါင်များဖြဲထားသောကြောင့်ပြဲ အာနေသောသူမ၏စောက်ဖုတ်အ၀တွင်သူ၏လီးကြီးကိုတေ့လိုက်ပြီးသူ၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုသူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ခိုင်းလိုက်သည်၊ထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုယ်အထက်ပိုင်းများကိုနောက် သို့လှန်လိုက်သောအခါတင်ပါးများကိုရှေ့သို့တိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွှာုးတေ့ထားသောလီးတန်ကြီး သည်စောက်ဖုတ်ထဲသို့တိုးဝင်သွားလေသည်၊ထို့နောက်ရှေ့သို့ရင်ချင်းအပ်အောင်ထိကပ်လိုက် သောအခါ။
စိုးမိုးခိုင်၏ဖင်သားများသည်နောက်သို့ဏ္ဍွေ့သွားပြီးစောက်ဖုတ်အတွင်းမှလီးကအပြင်သို့ ပြန်ထွက်လာလေသည်၊ထို့နောက်အနောက်သို့လှန်ချလိုက်သောအခါပြန်ှုတိုးဝင်သွားလေသည်၊ွှသို့ဖြင့်ဇော်ထွန်းကအောက်မှနှေုလှုပ်ကစားပေးနေရာစိုးမိုးခိုင်သည်အပေါ်မှအားမစိုက်ရဘဲ ပုခက်စီးနေသကဲ့သို့ခံစားရပြီးမိမိ၏စောက်ဖုတ်ထဲသို့လီးကြီးဝင်ချည်ထွက်ချည်ဖြစ်နေသော ကြောင့်အချက်ကျကျပွတ်တိုက်နေသောအရသာကိုလည်းအပြည့်အ၀ခံစားနေရလေသည်။ ဇော်ထွန်းကသူမ၏စိတ်များပိုမိုထကြွလာစေရန်မကြာခဏ နို့ကိုစို့ပေးလိုက်။ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်။တစ် ကိုယ်လုံးနမ်းလိုက်နှင့်လုပ်ပေးနေပြန်ရာစိုးမိုးခိုင်သည်ဇော်ထွန်း၏ကျော်ကိုပြန်လည်သိုင်းဖက်ရင်း တဟင်းဟင်းဖြစ်လာလေတော့သည်၊ထိုပုံစံသည်ဇော်ထွန်းအတွက်အားမရသလိုစိုးမိုးခိုင်အတွက် လည်းကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀မရစေသောကြောင့်ဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်ကိုနောက်သို့အသာလှန်ချ လိုက်ပြီး။
ဆင်းထားသောခြေထောက်များကိုဒူးထောက်အနေအထားသို့ပြောင်းယူလိုက်သည်၊ထို့ နောက်စိုးမိုးခိုင်၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသူ၏ပုခုံးပေါ်သို့ထမ်းတင်လိုက်ပြီးမှောက်ချလိုက်သော အခါစိုးမိုးခိုင်၏တင်ပါးများသည်မြောက်တက်လာပြီးစောက်ဖုတ်သည်လည်းပိုမိုတင်းမာလာလေ သည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်လီးတန်ကြီးကအပေါ်စီးမှစောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ဝင်ချည်ထွက်ချည်ဖြစ်နေ သည်ကိုတွေ့နေရသောကြောင့်ပှိုစိတ်ကြွလာသလိုဇော်ထွန်းသည်လည်းလီးကိုထိုးသွင်းလိုက် သောအခါပြားကပ်သွားသောစောက်ဖုတ်နှင့်လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါဖောင်းကြွတက်လာ သောစောက်ဖုတ်ကိုကြည့်ရင်းပှိုမဏ္ဍိုးမဏ္ဍွဖြစ်လာလေသည်၊ထို့ကြောင့်ပါးစပ်မှပြောရင်းအားရပါးရ ဆောင့်လိုးလေတော့သည် “စိုး ။ ကိုဇော်အားရပါးရလိုးတော့မယ်နော်” “ဖတ် ဖတ် ဖတ်” “အင့် အဟင့် အအ ကိုဇော်ရယ် စိုးကိုမသနားတော့ဘူးလား” “စိုးနာလို့လားဟင်” “နာတော့သိပ်မနာဘူး ။
ဒါပေမယ့်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျရင်အောင့်သွားတယ်” “ခဏ လေးပါကွာ အစမို့လို့ပါ ကိုဇော်မအောင့်တော့အောင်လုပ်ပေးပါမယ်” “ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကိုဇော်ရယ် စိုးဟာလေးကွဲထွက်သွားပါဦးမယ်” “စိတ်မပုပါနဲ့ကွယ်” ထို့နောက်ဇော်ထွန်းကစကားမပြောတော့ဘဲအားကုန်ဆက်လိုးလေတော့သည်၊စိုးမိုးခိုင် သည်လည်းအောင့်တာပျောက်သွားပြီးအရသာတွေ့လာလေတော့သည်၊ထို့ကြောင့်ဇော်ထွန်းက ဆောင့်ချလိုက်တိုင်းတင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုအစွမ်းကုန်ပင့်မြှောက်ပေးနေမိလေသည်၊ “အင့် ဟင့် ကိုဇော် ဆောင့်ဆောင့် အအ ဆောင့်လေ စိုးခံနိုင်ပါပြီ အင့်အင့်အင့်” “ဘွပ် ဘွပ် ဖတ် ဖတ် စွပ် စွပ်” “အား အင့်အင့် အအ အိ အင်းဟင်း အအ အား ဟင်း ဟင်း” ဇော်ထွန်းသည်လည်းအသက်ဏ္ဍှူသံပြင်းလာသလိုဆောင့်ချက်များကလည်းပှိုပြင်းထန်လာ လေသည်၊ထို့အတူအနှုတ်အသွင်းလည်းပှိုမြန်ဆန်လာသလိုစိုးမိုးခိုင်၏အကော့အပင့် အလှုပ် အယမ်းကလည်းပှိုမြန်လာလေသည်၊တစ်ခနအကြာတွင်တော့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဆတ်ဆတ်တုန် ခါရင်းတစ်ဦးကိုတစ်ဦးတင်းကြပ်စွာဖက်ကာပြိုင်တူပြီးသွားကြလေသည်၊ထို့နောက်တစ်ဦးနှင့်တစ် ဦးဖက်လျက်သားငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်….. ပြီးပါပြီ။
ကျော်ဝင်းက…..အိပ်ပျော်လွယ်သလောက် အလွန်အအိပ်စက်သူဖြစ်၏ အောက်ထပ်အခန်းနှင့်အပေါ်ထပ်ရှိ သူ့အခန်းမှာ တဆက်တည်းဖြစ်နေ၍ လှုပ်ရှားသံတွေကလည်း တဆက်တည်းလိုဖြစ်နေသည်။ ကျော်ဝင်းအသံမကြားရအောင် ခုတင်ပေါ်က အသာအယာဆင်းလိုက်သည်။ သူ့အခန်းမှာ မီးမှောင်နေသဖြင့် အောက်ထပ်အခန်းထဲရှိ မီးရောင်က လက်တစ်လုံးခန့် ပေါက်နေသော ကြမ်းပြင်ကို အရောင်ဟပ်နေသည်။ ထိုအပေါက်မှ အောက်ထပ်အခန်းဆီသို့ အသာလေးချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ဦးထွန်းမောင်နှင့် သူ့အဒေါ် မတင်သောင်းတို့…အဝတ်အစားကင်းကွာ ဗလာကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြင့် လိုးနေကြသည်ကို မီးရောင်အောက်တွင် အထင်းသားကြီး မြင်တွေ့ရသည်။အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ်အကွာအဝေးမှာ ခွန်နှစ်ပေလောက် ကျော်ကျော်မျှသာရှိသဖြင့် မြင်ရသော မြင်ကွင်းမှာ ဝေးလှသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်….ဘတ္ထရီဖန်ချောင်း မီးဖြစ်သဖြင့် အလင်းရောင်က လင်းထိန်နေသည်။ မတင်သောင်းလက်နှစ်ဖက်က ဘေးသို့ဆန့်ချထားပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ခံနေသည်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်လားမသိ ဦးထွန်းမောင် လိုးနေပုံက အားမာန်သိပ်မပါလှ။ ကြာခင်မှာပင် ဦးထွန်းမောင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲတုန်လှုပ်ကာ ဖင်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ရှုံ့ခွက်သွားပြီး ဆောင့်နေသော အရှိန်များလည်း […]
“ ငါ.. နင်နဲ့အတူတူနေကြည့်ချင်တယ်ဟာ…” လို့ တည့်တည့်ပြောချလိုက်တော့ သူက ရှက်သွားပြီး ခေါင်းလေးငုမ့်ပြီးပြုံးနေတယ် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းသည် ဝန်ခံခြင်းတဲ့…. ကျွန်တော်လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲ မှတ်ပုံတင်ပါလား မေးတယ် သူကလည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်၊ ပြီးတော့ သူက သူ့သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီး ဒီညပြန်မရောက်တော့ဘူး အမျိုးအိမ်သွားလည်ရင်း အဲ့ဒီမှာအိပ်မှာလို့ ရွီးလိုက်တာပေါ့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရှက်နေတာကတစ်ကြောင်း ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြည့်ကို မနည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်… ဟိုတယ်ကိုရောက်လာတော့ ည ၁၀နာရီလောက်ရှိနေပြီ နှစ်ယောက်ခန်းအဲကွန်းခန်းတစ်ခန်းယူလိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားထင်တိုင်းကျဲတော့မယ့်အချိန်ပေါ့ ပြတင်းပေါက်ကနေ အောက်ငုမ့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲ့ဒီအချိန်.. မန်းလေးမြို့ကြီးလည်း အိမ်ပျော်လုဆဲငြိမ်သက်နေပြီလေ၊ “ မီးပိတ်လိုက်ဟာ… “ ကျွန်တော်သူ့ကို နမ်းရင်းနဲ့ အဝတ်တွေချွတ်ချိန်မှာ သူ ရုတ်တရက်ပြောလာတော့ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်.. မီးပိတ်လိုက်ရင် ဘာမြင်ရမှာတုန်းနော့.. “ မီးတော့မပိတ်နိုင်ဘူး မျက်လုံးလေးတွေကိုယ်စီပဲမှိတ်ထားရအောင်လေ” ဆိုတော့။ သူမျက်လုံးလေးတွေမှိတ်သွားပြီး […]
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကပေါ့။အမျိုးတွေ ရှိတဲ့ မိထ္တီလာကို သွားဖို့ ကျနော် ကားဂိတ်ကို ဆင်းလာခဲ့တယ်။ ကားဂိတ် ရောက်တော့ လက်မှတ် ဖြတ်ပြီး ယဉ်ရပ်နား စခန်းမှာ ထိုင်စောင့် နေလိုက်ပါတယ်။ ညနေ ငါးနာရီလောက်မှာ ကားစက်နှိုးတော့ ကားပေါ် တက်ပြီး ထိုင်ရမယ့် ခုံမှာ ထိုင်လိုက်တယ်။ ထိုင်ပြီး မကြာခင်မှာ ကျနော်တို့နဲ့ ရွယ်တူ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်နဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ကျနော့် ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် ဘေးမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ထိုင်ပြီး နောက် ကောင်မလေးက သူမ ဘေး ဟိုတဖက် အစွန်မှာ သူမတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ ကောင်လေးက တဖက်မှာ ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော်က ဒီဖက် […]